Iyunithi yeApartment yoMlambo #1
Amagumbi amabini okulala akhanyayo kwaye acocekile axhotyiswe ngokupheleleyo! Ikhitshi eligcweleyo eline-oveni ephindwe kabini, isikhenkcisi esipheleleyo kunye nefriji, isitya sokuhlamba izitya kunye nesitovu. Itafile enkulu yegumbi lokutyela! Igumbi lokuhlala elikhulu! Igumbi lokulala eli-1 ukumkanikazi kunye negumbi elinye lokulala elinye! Ikwanayo negumbi lokuhlambela lesibini / iofisi! Isikhululo sasimahla sempahla ekwabelwana ngaso sibekwe ngaphandle nje kwesango lokungena!
Ibekwe kanye ecaleni koMlambo iClarion kwaye kukuhamba nje okufutshane kuyo yonke into ephakathi kwedolophu! ILazy River Canoe Rentals ibekwe kumgangatho osezantsi wesakhiwo kwaye inokukunceda ukuba uphume emlanjeni! Iyunithi ikwibhlokhi enye kuphela ukusuka kwimizila yethu ye-17 yeemayile ukuya kwimizila yentloko!
36" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Roku
Iyunithi ibekwe kwisitalato esikhulu kunye ne-Penn Avenue. IPenn Avenue yindawo entle eneentsapho ezimbalwa ezisebumelwaneni kwaye ininzi izolile.
Umphathi wam wendawo kunye nam sihlala sifumaneka ngefowuni, itekisi okanye i-imeyile! Iinkcukacha zoqhagamshelwano ziyafumaneka kwiyunithi! Ukungena kuyimfihlo njengoko sinokukwenza, njengokuba kukuhlala kwakho. Awuyi kundibona okanye umphathi wam ngaphandle kokuba uqhagamshelane nomnye wethu okanye ukuba ufuna into kodwa ungoyiki ukuqhagamshelana nomnye wethu ngayo nayiphi na imibuzo!
Umphathi wam wendawo kunye nam sihlala sifumaneka ngefowuni, itekisi okanye i-imeyile! Iinkcukacha zoqhagamshelwano ziyafumaneka kwiyunithi! Ukungena kuyimfihlo njengoko sinokukwen…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ridgway